DIGAAGGA MAGYAR: SHARAXAAD KA MID AH TARANKA IYO DABEECADDIISA, ISBARBARDHIGGA IYO SIFOOYINKA KORAYA EE CONTENT - BEERAHA DIGAAGA
Noocyada digaagga ee loo yaqaan 'Hungarian' ayaa lagu tiriyaa kuwa ugu fiican. Kuwaas waxaa ka mid ah Madyarov - digaagga wax soo saarka hilibka.
Shimbirahaasi waxay si dhakhso ah u gaari karaan qaangooyooyinka waxayna dhisaan muruq wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, digaaggan, Madyaradu waxay u baahan yihiin in si habboon loo quudiyo, haddii kale kobcintoodu aad ayay u sii yaraanaysaa.
Chicken Magyar waxaa laga helay hareeraha digaagga, laga soo bilaabo wakhtigii lagu noolaa ee ku yaalla dalka Hungary, oo leh Orpington. Natiijo ahaan, tarbiyeyaashu waxay u suurtagashay in ay helaan shimbirta dhakhso u koraysa oo leh muruqa wanaagsan.
Ka dib markii la siinayo farcan, khabiiradu waxay doorteen oo keliya shimbiraha ugu weyn uguna adag ee ugu weyn si ay u abuuraan digaag kuwaas oo difaacaya xaaladaha cimilada.
Shaqadu waxay sii socotaa abuurista miisaan badan oo aan la qabin, Magyar, sababtoo ah caleemaha keena waxay u baahan yihiin isticmaalka cunto gaar ahaan nafaqo leh si loo ilaaliyo miisaanka jidhka.
Sharaxaad ka timid Magyar
Maydhayaashu waa shimbiro waaweyn oo waaweyn. Waxay calaamad u yihiin dhar ballaaran oo ballaaran.
Waxay ku koreysaa xayawaan cufan, oo aragti ahaan sii kordhiya xajmiga shimbirta. Waxa kale oo ay si fiican u qariyaan qaabka jirka ee digaagga, sidaas awgeed tiradooda uma muuqato xagal.
Dhabarka Madyar waa mid ballaaran oo ballaaran. Waxay ku dhamaataa isdaba-marin, waxay u rogeysaa god yar oo yar. Marka la eego jirka, waxay ku taallaa xagal yar. On the daboollada ee roosters yihiin muddo dheer iyo wareegsan xirmooyin.
Digaagga naaska waa Magyar buuxa, sida digaag badan oo ah noocyada hilibka. Caloosha ayaa lagu soo koobay oo ballaaran. Baalalku si fiican ugu habboon jidhka shimbirta, waxay ku dhow yihiin qiyaas ahaan xagga gadaasha.
Madaxu waa yar yahay, wuxuu leeyahay casaan, aan muuqaal lahayn. Indhaha waa mid yar, midab casaan leh ama oranji ah. Kabriidayaashu waxay leeyihiin cayayaanka yar yar ee ilkaha daciif ah. Digaagga waxay leeyihiin shanlo oo ku dhow inta cabbirka isku mid ah.
Gogolka lafaha iyo digaaggu waxay ku wareegsan yihiin qaabab, cad oo midab leh. Kawariddu maahan mid aad u dheer, waxay leeyihiin wareega dhammaadka. Lugaha dhererka caadiga ah, boodboodka iyaga ayaa si buuxda u maqan. Faraha farqiga fog, dheer.
Haddii aad eegto dhowr sawir oo ah digaagga Pavlovsky, waxaad shaki gelin doontaa iyaga.
Digaagga xerada, dabcan, ma aha mid caan ah sida Pavlovsky. Si kastaba ha noqotee, waxay leeyihiin wax la yaab leh oo ku saabsan ... Akhri maqaalka iyaga ku saabsan.
Digaagga Madyarov wuxuu ka duwan yahay qoolleyada caloosha buuxda. Sababtoo ah, waxay u muuqdaan inay ka weyn yihiin kuwa qulqulaya, inkastoo ay leeyihiin miisaan jidh yar. Sida midabka, ka dibna labadaba labada dushiisa iyo digaagga waxay leeyihiin midab casaan-casaan leh. Xaaladdan oo kale, daboolka qiiqa ayaa had iyo goorba sii madow, oo ku dhowaad madow.
Magyarar ayaa si gaar ah looga soo saaray qoryaha si loogu dayactiro sawirrada shakhsi ahaaneed.
Taasi waa sababta shimbirahan u dulqaadanayaan qabow iyo kulaylka, iyo xayawaanka yaryar ayaanan qabin isbeddel deg-deg ah ee heerkulka iyo qoyaanka guriga. Naxariistaan ​​waxay u ogolaanayaan Magyarta inay bilaabaan xitaa dadka jecel digaaga cusub.
Qaadida shimbiraha ayaa muujiya mucjiso hooyada. Sida caadiga ah digaagga oo si ammaan leh u soo baxa ugxanta oo dhan. Isla markiiba ka dib, candhuufta hooyadu had iyo jeer waxay keenaysaa digaagdeeda waxayna si dhow u daawataa. Beeraha bilowga ah ayaa hubaal ah inuu ku faraxsan yahay muuqaalkan shimbiraha, maadaama aysan jirin baahi loo qabo in lagu qarash gareeyo lacago dheeraad ah si ay u iibsadaan khubaro.
Maydhayaashu waxay kordhiyaan miisaanka. Waqtiga ugu gaaban, waxaad heli kartaa 3 kg oo hilib tayo leh. Dabcan, digaagga noocyada kale waxay yeelan karaan miisaan aad u badan, laakiin, sida caadiga ah, waxay qaadataa muddo dheer.
Halista kaliya ayaa ah shuruudaha sare ee heerka quudinta. Haddii Maydho-yadu aysan helin quudinta borotiinka ku filan, waxay si deg-deg ah u dhimi karaan miisaanka. Tani waxay si gaar ah u tahay digaagga, maadaama ay ugu baahnayso in la siiyo borotiino qiimo leh.
Digaagga ayaa si gaar ah loogu abuuray in lagu hayo dhammaan meelaha yaryar.
Xaqiiqadu waxay u oggolaaneysaa digaagga digaagga xaalad kasta: waxay ku noolaan karaan guryaha caadiga ah iyo aviaries. Si kastaba ha ahaatee, waxay u baahan yihiin inay qalabeeyaan dayrka haboon, halkaas oo digaagga ay daaqi doonaan.
Maydhayaashu waxay u dulqaadanayaan qaboobaha qaboobaha iyo kulaylka kulul sababtoo ah daboolka maqaarka cawska. Xitaa marka lagu nasto guriga, booguhu waxay si fiican u ilaalinayaan digaagga ka soo duldhaca, sidaas darteed ma jirto baahi loo qabo in la sameeyo kuleylka dheeraadka ah ee ku jira.
Xilliga cimilada gaar ahaaneed, hay ah oo lagu qasi karo peat waxaa la dhigayaa dabaqa kaabada hawada furan. Inta lagu guda jiro isdhexgalka labadan qeybood ee dhirta, kuleylka ayaa la sii daayaa, taasoo u oggolaanaysa shimbiraha in ay helaan kuleyl dheeraad ah.
Ka dib markaad guriga ku kululeysid isku dar ah, naas-nuujintu waxay yeelan doontaa daryeel cusub: qashin ayaa loo baahan yahay in si joogto ah loo beddelo, sidaa daraadeed in jirrooyinka kale ee aaney ku noolaan karin. Nasiib darro, Magyaradu si sahlan ayey u jiran karaan, si ay u kordhiyaan difaacooda, waxay ku dari karaan fitamiinada iyo waxyaabo kale oo lagu daro cuntadooda.
Sidoo kale digaagga Magyar waa in ay marwalba helaan nafaqo habboon. Ujeedooyinkaas, si fiican u habboon raashinka warshad leh waxyaalla badan oo borotiinno ah. Intaa waxaa dheer in xayawaanka feed, shimbiraha waxaa la siin karaa isku dar ah ee hadhuudh, qamadi, ari iyo digir. On quudinta sida nafaqo leh, digaagga si dhakhso ah u koraan. Miisaanka caadiga ah waxaa loo isticmaalaa in lagu xakameeyo miisaanka.
Miisaanka nool ee cirifka Magyar wuxuu ku kala duwanaan karaa 2.5 ilaa 3 kg, iyo digaagga 2 ilaa 2.5. Isla mar ahaantaana, digaagga waxay soo saari karaan illaa 180 ukumood. Qaar ka mid ah jilayaasha ayaa ku doodaya in waxtarka ukunta ee shimbirahaasi ay si toos ah ugu xiran yihiin xaaladaha xabsiyada.
Iyada oo cunto tayo leh iyo cimilada wanaagsan, shimbiraha ayaa haysan kara in ka badan 200 ukumo-shaandho leh sanadkiiba. Ukumaha 55 g waxay ku habboon yihiin isugeynta.
Iibsiga shimbiraha qaangaarka ah iyo digaagga maalinlaha ah Magyar ku hawlan beeraha "Komov Dvor"Waxay ku taallaa dhulka Leningrad, si aad u dalban kartid nasiib daro aad u hesho St. Petersburg waxaad ka heli kartaa qiimaha saxda ah ee shimbirta lambarkan soo socda +7 (921) 365-41-96.
Digaagga waxaa laga iibsan karaa beer gaar ah "Raaxo jimicsi"Waxay ku taallaa magaalada Kurgan ee Omskoy Street, 144. Waxaad ka heli kartaa qiimaha saxda ah ee digaaga maalinlaha, iyo sidoo kale ukunta ukunta, adoo wacaya +7 (919) 575-16-61.
Barbar socda ilamaha waa kooxda reer Hungary. Digaagga Kuwani waxaa lagu gartaa murugo wanaagsan oo habdhaqan leh.
Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad jajabiso noocyadaas xitaa meelaha yaryar ee gaarka loo leeyahay, laakiin, sida ku jirta kiiska Magyar, reer Hungary waa inay helaan qadar qadar ah oo quudin, sidaa darteed koritaanka massku ma joojiyo.
Analoga kale waa digaagga Hercules. Digaaggaasi waxaa lagu gartaa hilibka murqaha badan iyo hilib tayo sare leh. Laakiin sharaftu ma dhicin.
Lakabka Hercules wuxuu hayn karaa illaa 300 ukumo sannadkii, laakiin si loo ilaaliyo waxsoosaarkan sida digaagga, sida Magyars, waa inay helaan nafaqo habboon.
Digaagga Magyar waa guulo kale oo ah taratiyeyaasha Hungarian. Waxay si dhab ah u maareeyeen shimbiraha wax soo saarka ukun wanaagsan iyo miisaanka jirka ee cajiib ah.
Marka laga soo tago wax soo saarka wanaagsan, digaagga ayaa ka farxin kara milkiilaha oo leh dabeecad aamin ah oo deggan, kaas oo u ogolaanaya inay la socdaan digaagga kale.